Intanet na blọọgụ - Geofumadas
usoro na atụmatụ maka Intanet na blọọgụ.
Kanbanflow - ezigbo ngwa iji jikwaa ọrụ echere
Kanbanflow, bụ ngwa ọrụ arụpụtara enwere ike iji ya site na ihe nchọgharị ma ọ bụ na ngwaọrụ mkpanaka, a na-ejikarị ya na mmekọrịta mmekọrịta dịpụrụ adịpụ, ya bụ, ụdị anaghị akwụ ụgwọ; Site na ya, ndị otu ma ọ bụ ndị otu na - arụ ọrụ nwere ike ihu ọganihu nke ọrụ nke onye ọ bụla n’ime ndị otu ha. Ọ bụrụ na ọ bụ ...
Nsogbu Venezuela - Blog 23.01.2019
Yesnyaahụ, n'elekere iri na otu nke ụmụnne m pụtara na ngagharị iwe, a gwara m ha biko gbagoo n'ụlọ, ma nwanne m nwanyị zara - gịnị ka m ga-eme n'ụlọ? Agụụ na-agụ m, naanị ihe dị na ngwa nju oyi bụ akwa na Ọ bụrụ na m rie otu, ana m ewere nri ehihie n'aka onye ọzọ, enwere m ...
Internet na Blogs, Politics na Democracy
Nwebatara ma ọ bụ mezuo eziokwu? Kedu nke ka mma iji chee ọrụ ngo?
Ofzọ nke igosipụta ọrụ agbanweela mgbanwe dị mkpa, site na nchịkọta nke ụlọ ọrụ na ntinye nke teknụzụ ọhụrụ. Ma ọ bụ oge tupu ọganihu ndị a erutekwara mpaghara akụkụ ahụ. Ezigbo eziokwu na eziokwu nke mebere na-enye ohere nke igosipụta ọrụ nke ...
Ọganihu nke teknụzụ emeela ka ụmụ mmadụ nwee nkwurịta okwu site na ebe ọ bụla, yana dịka nka ha ma ọ bụ aka ọrụ ha, ọ ga-ekwe omume ịnye ụdị ọrụ niile na nyiwe dịka Freelancer, Workana ma ọ bụ Fiver, ndị nwere ndị mmekọ n'ihe gbasara nnabata na nnyefe. nke ịkwụ ụgwọ site na ụzọ dị iche iche. Ke ibuotikọ emi…
Rincón del Vago: Ihe ndị ahụ mere ka anyị nwee nsogbu otu ugboro
A na-ekwukarị na oge ụmụ akwụkwọ bụ oge kachasị jụụ na nke kachasị mma na ndụ mmadụ. Ọ bụ oge ndụ mmadụ mgbe ọ na-enweghị ndụ, n’echeghị echiche banyere ọrụ na-enweghị nchegbu gbasara ọdịnihu; oge nke ndụ mgbe ...
Ebumnuche nke atụmatụ azụmaahịa ọ bụla nwere ọnụnọ na ịntanetị bụ mgbe ọ bụla ọ ga-eweta uru. Nke a metụtara ma maka nnukwu ụlọ ọrụ nwere weebụsaịtị, nke na-atụ anya ịsụgharị ndị ọbịa gaa ahịa, yana maka blog na-atụ anya inweta ndị na-eso ụzọ ọhụụ ma jigide iguzosi ike n'ihe nye ndị dị ugbu a. N'okwu abụọ a, ...
N'otu oge anyị ekwenyeghị na ọrụ nke akaụntụ Twitter nwere ike ịdị ezigbo mkpa. Mana n'ime ụwa ebe anyị na-eri mmiri n'oké osimiri, awa atọ nke ndụ Tweet na-adọrọ adọrọ ma ọ bụrụ na a na-ewepụta isiokwu ndị ahụ na-anọchi anya ihe ọmụma n'ụzọ kwekọrọ na nhọrọ, gbakwunyere ...
Karmacracy, otu n'ime ihe kachasị mma maka blọọgụ na netwọk mmekọrịta
Ndị nwere blọọgụ, ibe Facebook ma ọ bụ akaụntụ Twitter nwere ike ịjụ onwe ha ajụjụ ndị a: Olee nleta ole sitere na Tweets m? Olee otú ọtụtụ ndị ọbịa na-abata na elekere mbụ mgbe m debanyere njikọ na ibe Facebook m? Esi hazie otu tweet taa na 10: 35 ...